Tun Tun's Photo Diary: Taungyi #6 (University, Shwe Phone Pwint pagoda & Padamyar Cave)
Taungyi #6 (University, Shwe Phone Pwint pagoda & Padamyar Cave)
စူငှာမုနိလောက ချမ်းသာစေတီ ကို သွားပြီးတော့ တောင်ပေါ်က ဘု၇ား ၂ခု ကို သွားဖို.ကျန်ပါသေးတယ်။ လမ်းမှာ တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် ကို တွေ.လို. ကားခဏရပ်ခိုင်းပြီး ဓါတ်ပုံ ဆင်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဖွင့်ရက်ထင်တယ် ကျောင်းသား၊သူ တွေ လဲရှိတယ်။ Canteen လဲ ဖွင့်ထားတယ်။ ကျောင်းအတွင်းထဲတော့ မ၀င်ခဲ့ဘူး။
ကျောင်းဘက် ကို ကြည့်ပြီးတော့ Canteen ဘက်ကို ဓါတ်ပုံ လှမ်း၇ိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို အဲ့ဘက် canteen ဘက်က လူတစ်ယောက်ေ၇ာက်လာပြီး။ အစ်ကို ဘာလို. ဓါတ်ပုံရိုက်တာလဲ။ ဒီ ဘက် canteen ဘက်ကို မ၇ိုက်ပါနဲ.လား။ ဘာညာလာပြောတယ်။ အဲဒါ နဲ. ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ အ၇င် ဒီကျောင်းမှာ တက်ခဲ့လို. အမှတ်တ၇ လာ၇ိုက်တာလို. ညာပြီးပြောလိုက်တယ်။ နောက်မှ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော်စိတ်ထင် အဲ့လူက အဲ့ဒီ canteen ဘက်မှာ မဟုတ်တ၇ုတ် ဆိုင်တွေ ဖွင့်ထားတယ် ထင်တယ်။ မဟုတ်တ၇ုတ် ဆိုင်ဆိုတာ ဘာဆိုင်လဲ သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။း)
တက္ကသိုလ်ကို ဖြတ်လာပြီး နောက် တောင်ပေါ် တောက်လျှောက်တက်ပါပြီ။ တောင်ပေါ်က ဘု၇ားတွေက လာတဲ့သူ နည်းပုံ၇ပါတယ်။ တခြားဘု၇ားဖူး နည်းနည်းပဲ တွေ.ခဲ့တယ်။ အရင် ဦးဆုံးေ၇ွဘုန်းပွင့် ဘု၇ားကို ၀င်ပါတယ်။
ဒီ ဘု၇ားကနေ တောင်ကြီး မြို.တခုလုံးကို အခုလိုမြင်၇ပါတယ်။ အခုမှ ပဲ တောင်ကြီးမြို.က တော်တော်ကြီးတဲ့ မြို.ဆိုတာ သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ နေ၇ာ တွေကို ပြန်ရှာကြည့်တယ်။ ဟိုတယ်၊ မြို.မဈေး၊ ပန်းခြံ တွေ ကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရတယ်။ တခြားကိုယ် မေ၇ာက်ဖူးတဲ့ စေတီ တွေကော မြင်ရတယ်။
City view from Shwe Phone Pwint Pagoda
ကင်မ၇ာက Zoom ဆွဲလို.ရလို.သာ ဒီလို တောင်ကြီးမြို. ကို အပေါ်စီးကနေ အသေးစိတ်မြင်ရတာ။ မဟုတ်၇င် မလွယ်ဘူး။ေ၇ွဘုန်းပွင့် ဘု၇ားပေါ်မှာ လိပ်ပြာတွေ အင်မတန်ပေါ်ပါတယ်။ Macro Photography စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင် ဓါတ်ပုံ၇ိုက်စ၇ာ လိပ်ပြာတွေ အများကြီးပဲ။ တချို.တွေဆို အသေကောင်တွေ။ ရှင်နဲ. အကောင်တွေလဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး နားနေတော့ တော်တော်လေး ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇တာ လွယ်တယ်။
A lot of insects and butterflies at Shwe Phone Pwint Pagoda.
ဒီေ၇ွဘုန်းပွင့် ဘု၇ားက တောင်ကြီး မြို.ကို ဗြူးကောင်းကောင်းကြည့်လို.၇တာ ကလွဲလို. တခြား ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး။ ဒါနဲ.ပဲ ပြန်တော့မယ် လုပ်နေတုန်း အပြန်လမ်းမှာ ပတ္တမြား လှိုဏ်ဂူသို. ဆိုပြီး လမ်းညွန်ထားတာတွေ.လို. လမ်းလျှောက်ပြီးဆင်းသွားတယ်။ အဆင်းလမ်းဆိုတော့ သွား၇တာ မြန်ပါတယ်။
Padamyar Cave is just5minutes walking distance from the Shwe Phone Pwint Pagoda
လှိုဏ်ဂူက အရမ်းကြီးတော့ မကြီးဘူး။ ဒီနေ၇ာကို ရှာတွေ.ထားတာ ကြာပြီး မကြာသေးဘူးလား မသိဘူး။ တချို.နေ၇ာတွေ အခုမှ ပြင်နေတုန်းရှိသေးတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သဘာဝအတိုင်း ထားလိုက်ရင် တောင် ပိုကောင်းမလားလို.။
ကျောင်းလစ်တာကို ဒီလို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲ။
ဒီအသီးတွေ က ကျွဲကောသီးတွေထင်တာပဲ။
at 3/25/2014 08:59:00 AM
Labels: Insect, Myanmar, Taungyi
Anonymous March 26, 2014 at 6:18 AM